🥇 यातायात रसदको लागि कार्यक्रम
यातायात रसदको लागि कार्यक्रम को भिडियो
यातायात लजिस्टिकको लागि प्रोग्राम अर्डर गर्नुहोस्
के रसदका लागि नि: शुल्क अनुप्रयोग वास्तविकता हो वा केहि नि: शुल्क पाउन सार्थक हुनु असम्भव छ? हामी यस लेखमा यस प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौं। छोटो उत्तर हो हो - यो वास्तविक हो। तर प्रश्न यो छ कि यस किसिमको कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी छ, र के यो कुनै राम्रो छ? यु.एस.यु. सफ्टवेयरको सफ्टवेयर विकास टोलीले एक स्पष्ट जवाफ दिन्छ - राम्रो कार्यक्रमहरूको डेमो संस्करण मात्र नि: शुल्क हुन सक्छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूको पूर्ण संस्करणहरू सँधै भुक्तान गरिएको उत्पादन हुन्छ र USU सफ्टवेयर पनि यसको अपवाद हुँदैन।
USU सफ्टवेयरको डेमो संस्करणमा सबै आधारभूत कार्यक्षमता समावेश छ जुन कुनै पनि व्यवसायलाई आवश्यक हुन सक्दछ। यद्यपि, डेमो संस्करणको सीमित परीक्षण अवधि छ र यसैले लामो-अवधि यातायात रसद स्वचालनका लागि उपयुक्त छैन। वितरणको उद्देश्य सूचनामूलक उद्देश्यका लागि मात्र हो। हाम्रो प्रोग्राम नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ र परीक्षण अवधिको दुई पूरा हप्ताको अवधिमा तपाईं यसको कार्यक्षमतासँग आफूलाई परिचित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट मा डेमो संस्करण पाउन सक्नुहुन्छ। पूर्ण संस्करण खरीद गर्नका लागि, आवाश्यक साइटहरू प्रयोग गरी टेक्निकल सपोर्ट टीमलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अनुप्रयोगको क्षमताहरूको बारेमा सबै विस्तृत जानकारी त्यहाँ फेला पर्दछ।
यातायात रसदको लागि निःशुल्क प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्नु उचित छैन। यस किसिमका प्रोग्रामहरूले सबै कार्यहरूको लागि स्वचालनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् जुन ईन्टरप्राइजको अगाडि खडा हुन्छ जुन कुनै सवारी परिवहन र लजिस्टिक कम्पनीलाई चाहिने सब भन्दा सटीक व्यवस्थापन चाहिन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ USU सफ्टवेयर को विकासकर्ताहरु बाट एक अनुप्रयोग खरीद, तपाईं एक सम्पूर्ण को रूप मा कम्पनी को काम ट्र्याक गर्न को लागी एक उत्कृष्ट अवसर प्राप्त गर्दछ, र प्रत्येक कर्मचारी को लागी व्यक्तिगत। कार्यक्रम ट्र्याकिंग कर्मचारियों को काम को समय को लागी कार्यक्षमता संग सुसज्जित छ। कर्मचारीले गरेको प्रत्येक कार्य रेकर्ड गरिएको छ। साथ साथै यसमा खर्च गरिएको समय र कामको गुणस्तर पनि प्रदान गरियो।
यदि तपाईंलाई यातायात रसदको लागि प्रोग्राम आवश्यक छ भने, यसलाई नि: शुल्क डाउनलोड गर्न प्रयास गर्नु अव्यावहारिक हो, तर तपाईंको व्यवसायमा ठूलो बजेट छैन, हामी तपाईंलाई कम या कम मूल्यको लागि यातायात रसद स्वचालित गर्नका लागि हाम्रो समाधान प्रस्ताव गर्न सक्छौं। उपयोगी कार्यहरूको विशाल विविधता। उदाहरण को लागी, USU सफ्टवेयरको सहायताले तपाई वास्तविक डिलिभरीमा सबै डेलिभरी ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। तर यातायात रसद व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रमको कार्यक्षमता मात्र त्यहाँ रोकिदैन।
यूटिलिटी डेटाबेसमा यातायात रसद सम्बन्धी विस्तृत जानकारी हुन्छ। तपाईं प्रोग्रामको डाटाबेसमा भण्डार गरिएको जानकारीमा छिटो पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि प्राप्तकर्ता र पार्सलको प्रेषकको बारेमा जानकारी, उत्पादका विशेषताहरू, यसको आकार, तौल, र यस्तै। थप रूपमा, तपाईं कार्गोको मान, नक्शामा डेलिभरीको स्थान, र प्रेषणको मिति अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।
डेमो संस्करणको रूपमा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिने यातायात लजिस्टिक्स प्रबन्धन प्रोग्रामसँग पूर्ण फाइद अनुप्रयोगहरूको धेरै सुविधाहरू छन्। प्रोग्राम जुन तपाईंले सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ यूएसयू सफ्टवेयरले सक्षम गरेको प्रकार्यहरूको सर्तमा त्यस्तो कभरेज प्रदान गर्न सक्षम हुनेछैन। यसको अतिरिक्त, मूल्य-गुणस्तरको रूपमा भिन्न प्यारामिटरहरूको अनुपातमा, गैर-नि: शुल्क अनुप्रयोगहरूको बीचमा पनि, हाम्रो उपयोगिता अझै बाहिर खडा छ। युएसयू सफ्टवेयर टोलीबाट यातायात रसद लेखा कार्यक्रमको नयाँ पुस्ता कार्गो यातायात कम्पनीहरू र कुनै पनि अन्य लगिस्टिक एजेन्सीहरूको संरचनामा पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ।
नि: शुल्क यातायात रसद अनुप्रयोगहरू पर्याप्त क्षमताको साथ बहु मोडल लदान ट्र्याक गर्न सक्षम हुनेछैन। र युएसयू सफ्टवेयरले कार्गोको यातायात मार्ग ट्र्याक गर्ने कामलाई पूर्ण रूपमा ह्यान्डल गर्दछ, वितरणको प्रकारहरू, र प्रयोग गरिएको यातायात द्वारा क्रमबद्ध गर्न सक्षम छ। जब यो हाम्रो कार्यक्रममा आउँदछ, यसले खास फरक पार्दैन कि कम्पनीले कस्तो किसिमको यातायात प्रयोग गर्दछ जब सामानहरू सार्दा। यो हवाई यातायात हो, रेल, ट्रक, जहाज, वा बहु मोडल यातायात - हाम्रो कार्यक्रम यसको सबै कार्यहरू पूरा गर्न कुशल र द्रुत हुनेछ। कार्यक्रमका अन्य सुविधाहरू जसले कुनै पनि उद्यममा यातायात लजिस्टिक्सको साथ मद्दत गर्दछ यस प्रकारका सुविधाहरूमा यातायात र कार्गो को आकार र यातायात मा सामानको मात्रा को आधार मा प्रकार द्वारा वितरण छुट्याउने क्षमता को रूप मा शामेल छ।
यदि संगठनसँग धेरै विदेशी शाखाहरू छैनन्, र यातायात वस्तुहरूको मात्रा धेरै ठूलो छैन भने, यो साना कम्पनीको लागि संस्करण किन्नु आवश्यक छ, जबकि त्यहाँ विभिन्न देशहरूमा शाखाहरू भएका लजिस्टिक उद्यमहरूका लागि पनि विकल्प छ। यातायात रसदको लागि उपयोगिता प्रोग्राम जुन तपाईं डेमो संस्करणको रूपमा मात्र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सीमित समयको लागि काम गर्दछ।
निःशुल्क रसद कार्यक्रमहरू मात्र सीमित समय प्रयोगको प्रस्ताव गर्दछ। धेरै मूल्यको लागि अनुप्रयोगको इजाजतपत्र संस्करण खरीद गर्दा तपाई सामान र यात्रुहरूको यातायातको क्षेत्रमा अफिसको कामको प्रबन्धका लागि उत्तम अनुकूलित कार्यक्रम पाउनुहुनेछ। युएसयू सफ्टवेयर यति बहुमुखी छ कि यो कुनै पनि रसद कम्पनीको स्वचालनका लागि उपयुक्त छ।
जब तपाईं यो युटिलिटी पहिलो पटक चलाउनुहुन्छ, तपाईंले प्रणालीमा यसलाई दर्ता र प्राधिकरण गर्न आवश्यक पर्दछ। प्रयोगकर्तामा लग ईन गरे पछि असंख्य पूर्वसेट डिजाइनहरूको विकल्प प्रस्ताव गरिन्छ, जुन उनीहरूको कार्यस्थल निजीकृत गर्न मद्दत गर्दछ। डिजाईन र निजीकरण विषयवस्तु छनौट गरे पछि, अपरेटरले कार्यक्षमता र इन्टरफेस सेटिंग्सको छनोटको लागि अगाडि बढ्छ। सबै परिवर्तनहरू व्यक्तिगत खातामा बचत भैरहेको छ र त्यस पछि आधिकारिकताको समयमा, सबै पछि फेरि कन्फिगर गर्नु आवश्यक पर्दैन। प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत खाता यसको व्यक्तिगत सेटिंग्सको साथ सिर्जना गरिएको हो।
नि: शुल्क कार्यक्रमहरू ठूलो मात्रामा कामका लागि अनुकूलित हुँदैनन्, त्यसैले यो तुरुन्त भुक्तानी गरिएको, कुशलतापूर्वक कार्य गर्ने प्रोग्राम किन्नु उत्तम र अधिक लाभदायक हुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंलाई तपाईंलाई निर्दिष्ट गरिएको कार्यहरू सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। युएसयू सफ्टवेयरमा, सबै प्रकार्यहरू क्रमबद्ध रूपमा व्यवस्थित छन्, जानकारी उचित फोल्डरहरूमा बचत गरिन्छ, जहाँ चासोको जानकारीको ब्लक पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। रसदका लागि नि: शुल्क कार्यक्रमहरूले तपाईंलाई चयनित लक्षित दर्शकहरूको सामूहिक मेलिंग गर्न मद्दत गर्न सक्षम गर्दैन, तर हाम्रो कार्यक्रमले सजिलैसँग यो कार्य सम्हाल्न सक्छ। सम्पर्कहरूको लक्षित चयन गर्न र सन्देश रेकर्ड गर्न यो पर्याप्त छ। अनुप्रयोगले स्वचालित तरीकाले अगाडि कार्यहरू गर्दछ, जसले धेरै खर्चहरू कम गर्दछ।
हाम्रो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रयोगले तपाईंलाई नाटकीय रूपमा तपाईंको उद्यमको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको संख्या घटाउन अनुमति दिन्छ। तपाईं अफिस कामको अप्टिमाइजेसनलाई स्थगित नगरी नै अहिले नै यातायात रसद कार्यक्रम डाउनलोड गर्न र सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। USU सफ्टवेयर खरीद गर्नको लागि धेरै थोरै रकम तिरेर, तपाईंले श्रमिकहरूको अत्यधिक फूलेका कर्मचारीहरू कायम राख्नमा ठूलो धनराशी बचत गर्नुहुन्छ।
यातायात रसदको लागि हाम्रो प्रोग्राम, जुन तपाईं यूएसयू सफ्टवेयरको वेबसाइटमा डेमो संस्करणको रूपमा निःशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, एउटा मोड्युलर उपकरण स्कीम छ, जसले अपरेटरहरूलाई यससँग काम गर्न सजिलो बनाउँदछ। तपाईं प्रोग्राम डाउनलोड र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ चाँडै र कुनै पनि जटिलता बिना। अनुप्रयोगको इजाजतपत्र संस्करण खरीद गर्न, कृपया हाम्रो कम्पनीका विशेषज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। सबै सम्पर्कहरू हाम्रो कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा सूचीबद्ध छन्।